- नेपाली सन्देश बिहिबार, अशोज १८, २०७५ , 6.2K जनाले हेर्नुभयो
FILE- In this Oct. 11, 2015 file photo, Nepal's Khadga Prasad Oli addresses the parliament before being appointed as the new Prime Minister in Kathmandu, Nepal. Oli has resigned before facingaconfidence vote in parliament that he expected to lose. (AP Photo/Niranjan Shrestha, File)
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको छेको पारी कोस्टारिका घुमेर मानार्थ विद्यावारिधि मात्र ल्याउँदै छैनन्, ट्वीटरमा पोस्ट भएका तस्बिर हेर्दा हवाई ऊर्जालगायत पूर्वाधार संरचना नियाल्न गएको थाहा हुन्छ ।
चारदिने सद्भावना भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले के सिके, उनै जानून्, नेपालले भने ५० लाख पनि जनसंख्या नभएको त्यो सानो टाढाको देशबाट धेरै सिक्न सक्छ ।
कोस्टारिकाले संसारको ध्यान तानेकै प्रगतिशील नेतृत्वका लागि हो । छोटो गृहयुद्धपछि सन् १९४८ मा उसले राष्ट्रिय सेना खारेज गरिदियो । त्यसयता यो मध्य अमेरिकी देश द्वन्द्व समाधान तथा रोकथाम अध्ययन केन्द्र हुँदै आएको छ । त्यही भएर त उसले राष्ट्रसंघीय शान्ति विश्वविद्यालयलाई आतिथ्यता दिन सकेको हो । त्यसकै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली जान पाएका हुन् ।
यसको अर्को विशेषता दीर्घकालीन वातावरणीय नेतृत्व हो । उसले जंगल पुन: ब्युँत्यायो । देशभरि आरक्षित क्षेत्र बढायो । कोस्टारिका संसारकै खुसीमध्येको देश कहलिनुको कारण उसको नीतिगत सुस्थिरता र मानव जीवनप्रति उच्च सम्मान गर्ने दर्शन हो । उसले सबभन्दा सफलता पाएको क्षेत्रमध्ये ऊर्जा हो जसमा नवीकरणीय माध्यम उदाहरणीय छ । जलस्रोतबाहेक पृथ्वीको ताप, हावा र जैविक इन्धनका आधारमा ऊर्जा उत्पादन गर्छ ।
गणतन्त्र कोस्टारिकामा राजनीति स्थिर छ । शिक्षामा निकै लगानी गरेको छ । एक समय कृषिमा निर्भर उसले वित्त, विदेशी कम्पनीका लागि सेवा, औषधि उत्पादन तथा पर्या–पर्यटनको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । दिगो वातावरणका लागि राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले तोकेका पाँचै मापदण्ड पूरा गर्ने एउटै मुलुक हो यो । वातावरणमैत्री र जैविक विविधताले सम्पन्न देश । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास समाधान नेटवर्कको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोस्टारिकाको कदर हुनुको कारण स्वस्थकर जीवनयापन, सामाजिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारशून्य समाज र प्रतिव्यक्ति आय हो । तीन वर्षसम्म त यो संसारकै श्रेष्ठ खुसी देश दरिएको छ ।
सन् १९९० को दशकमा ‘हरित संस्कृति’ पारित भएयता उसले राष्ट्रिय जंगल कानुन निर्माण ग‍र्‍यो । कानुनले जंगल, पानीका स्रोत, जैविक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरतालाई पर्यटन तथा वैज्ञानिक स्रोतका रूपमा पहिचान तथा संरक्षण गरेको छ । वातावरण संरक्षण कार्यक्रमका लागि छुट्टै आर्थिक संयन्त्र व्यवस्था गरेको छ । त्यही कारण त सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने मध्यअमेरिकी मुलुक बन्न पुगेको छ । सन् २०१६ मा २९ लाख विदेशी पर्यटक पुगे । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा ३.६ प्रतिशत पर्यटनबाट आउँछ, कोस्टारिकामा भने त्यसभन्दा दोब्बर । ७ प्रतिशत ।
कोस्टारिकामा यात्रा सेवा प्रदायकहरू पनि प्रकृतिमैत्री पर्यटनप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि परिचित छन् । जस्तो, विमान कम्पनी नेचर एयर । यो विश्वकै पहिलो कार्बन न्युट्रल एयरलाइन हो । उडानका क्रममा वर्षभरि कार्बन उत्सर्जन गरेबराबरको मूल्य यसले वातावरण मन्त्रालयलाई अनुदान दिन्छ, वर्षावन जोगाउन । यसको एरोटिका नामक विभागले बायोडिजेल उत्पादन गर्छ, जुन जमिनका गाडी र जेनेरेटरमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ । यो तेल पुनरावर्तित सागसब्जीद्वारा उत्पादन हुन्छ । यस्ता होटल पनि छन् ।
पर्या–पर्यटनका लागि खलबल नपुर्‍याइएको प्रकृति चाहिन्छ । यो प्राय: सानो सानो स्तरमा हुन्छ । हाम्रा गाउँघरमा होमस्टे चलाउनेहरूले पनि धान्न सक्छन् । पर्या–पर्यटन प्रकृतिप्रति समर्पित हुन्छ । वातावरणको सम्मान गर्छ । स्थानीयजनको हित हेर्छ । आर्थिक अवसर दिलाएर उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्छ । सबल बनाउँछ । संस्कृति जगेर्ना गर्न सिकाउँछ । खाद्य संस्कृति बचाइदिन्छ ।
संसारकै खुसी देशमध्येमा पर्ने कोस्टारिकाले जोड दिएको केमा हो भन्ने हेर्‍यौँ भने हामीलाई मार्गदर्शन हुन्छ । उसले समानतामा जोड दियो, सहकार्यमा, साझेदारीमा, लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामा, वातावरणीय दिगोपनमा र साथसाथै सबल सार्वजनिक संस्थाहरूमा । उसको खुसी अस्थायी, निर्दोष वा अज्ञानताका आधारमा निर्मित छैन । गरिब देशहरूलाई तिनका स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने सही नीतिहरू चाहिन्छन् भन्ने प्रेरणा लिन सकिन्छ । नेपालले त झन् बढी, जतिखेर हामी समृद्धिका नाममा प्रकृति, संस्कृति, सम्पदा, स्वावलम्बनमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधिका हिस्सा हुँदै छौँ ।